ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ချောင်းလေးများ၊ မိန်းကလေးများအတွက်လမ်းညွှန် - သတင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုလက်ချောင်းနဲ့ - မိန်းကလေးတွေ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမည်သို့ချန်ထားရမည်၊ မည်သို့လက်ချောင်းကိုသိခြင်းသည်သင်ရရှိနိုင်သောအရေးကြီးဆုံးစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပိုမိုကိုက်ညီစေရုံသာမကလိင်မှသင်လိုချင်တာကိုသင်သတိပြုမိသည်ကိုလည်းဆိုလိုသည်။
ကြည့်ပါ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြုကြပြီ။ ၎င်းအကြောင်းကိုပြောခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမည်သို့လက်ချောင်းကိုသိခြင်း၌ရှက်စရာမရှိပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောမညီမညာဖြစ်နေသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ထိုသို့မပြုသည်ကိုဆိုလိုသည်။
သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့ - ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်အမျိုးသမီးအော်ဂဇင်များနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ကိုသင်ရေးပြီးပြီ။
ဒီအပေါ်ဝေး Doodling ??????
မျှဝေသည် IS 3:13 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2018 ရက်တွင် (@theblack_lodge)
မင်းဟာညာဘက် Headpace နေရာမှာရှိဖို့လိုပြီးအနားယူပါ
သင်အလျင်စလိုမသေချာပါစေ။ သင့်တွင် privacy ရှိကြောင်းသေချာစေပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ခံစားချက်ရရန် porn ကိုကြည့်ပါ
အမည်းစက်မရှိပါ၊ သင်၏ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းမှအဘယ်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ ယောက်ျားတွေကဒါကိုကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းလည်းလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်သော်လည်း 10 ကြိမ်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလာစေပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင်ရှည်လျားသောစီးနင်းအတွက်နေလျှင်ကြည့်ရှုကြဘူး။
သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့လက်ချောင်းကိုလေ့လာရမည်၊ ၎င်းတို့သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးသူတို့ထိသမျှမည်မျှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော vibrator တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါအသုံးဝင်သောအချက်တစ်ချက်။ သင့်ရဲ့ clit ပွတ်တိုက်နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါသူတို့ကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
သငျသညျသေးတည်နေရာကြပြီမဟုတ်လျှင်, သင်၏ G-spot ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေသည်သင်၏အချိန်တစ်ခုလုံးမဖြုန်းပါနဲ့
သငျသညျချွတ် pissed လာတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားလူတိုင်းကသင့်ကိုဆိတ်ကွယ်ရာကရှာတွေ့မှစီမံခန့်ခွဲတော်မူကြောင်းကို၎င်း, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်သင်အမှန်တကယ်လာမယ့်အနေဖြင့်ပို။ ပို။ ဝေးလာပြီတစ် ဦး အဆင်မပြေအနေအထားအတွက်ဝေး jabbering ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ဘေးထွက်မှတ်စု: ဒါဟာ fuck ဆိုတဲ့ဒဏ္myာရီပါပဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ @fineartscenter မှာဒီပျော်စရာအပိုင်းအစကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာ! ဘရာဇီးဒီဂျစ်တယ်အနုပညာရှင် @elisariemer Pleasure (Uterus) 2015 မှအသေးစိတ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းဗိုက်များနှင့်နာကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်၏သားဥအိမ်များနှင့်သားအိမ်နှင့်ပေါင်းသင်းသောကြောင့်သူတို့ကိုfemတ္တ ၀ ိုက်ကစားခြင်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောတိုင်းပြည်အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အလွန်လန်းဆန်းစေသည်။
မျှဝေသည် ဟန္န Moghbel (@hannahmoghbel) နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင်ညနေ ၇း၃ နာရီတွင် PST ၌
ဒါဟာအားလုံးပိုက်ဆံရှိရာင်သော clit အကြောင်းကိုပါပဲ။ သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့လက်ချောင်းကိုထုတ်ယူပြီးပြီဆိုတာနှင့်သင် clit သည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ clit အပေါ်ဖိအားအမျိုးမျိုးကြိုးစားပါ
သင် porn မရရှိပါက, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွင့်
တခါတရံအချို့ beaut အတွင်းခံအချို့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ငါ FIT ကဲ့သို့သောဖြစ်ခြင်းသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်လှည့်စေနိုင်သည်။
တစ်ယောက်ကသင့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသင့်ကိုမဆင်မခြင်လက်ညှိုးထိုးသလိုမျိုးခံစားရနိုင်သည်။ သင်ကသင်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်တူသည် (သို့မဟုတ်ထိခိုက်နိုင်သည်) ကဲ့သို့သုံးယောက်သို့မဟုတ်လေးယောက်သည်ခံစားရလိမ့်မည်။ ရသည်မှာသင်တစ် ဦး '' ဒီမှာလာ '' ရွေ့လျားမှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးရန်ရည်ရွယ်ပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါဘာလုပ်ပေးမယ့် fuck ဆိုတဲ့သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ဆင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ဘဏ္theာများကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ သင်မှားမိသည့်နေရာ၌သင်၏ဘဏ္treာရှိသည်ဂျိုးဇက်ကမ့်ဘဲလ်ရှိသည်။ @lathams_illustrations အားဖြင့်ယော Wolf က။ #lathamsillustrations #josephcampbell #treasure #vulva #loveyourvagina # Pussypositive #discoveryourtreasure #vajayjay #vaginaart #abyss #Treasuresinlife #treasureit
မျှဝေသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] 3:47 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 2018 ရက်တွင် (her.period @)
သငျသညျချက်ချင်းတစ်ခုခုခံစား start မပါဘူးဆိုရင်, ထွက်မထင်မှတ်ကြဘူး
၎င်းသည် PROCESS ဖြစ်ပြီးသင်စူပါကို off-set မှမဖွင့်ပါကလာရန်အချိန်ယူရမည်။
အရာဝတ္ထုအဲဒီမှာခြောက်သွေ့လာပြီလျှင် lube ကိုသုံးပါ
သူတို့သံကဲ့သို့ကြောက်စရာမဟုတ် Butt ပလပ်
မှန်ပါသည်၊ လူတိုင်းသည်နေရောင်အားမပေးနိုင်သည့်လိင်ကစားစရာတစ်ခု၏စိတ်ကူးကိုလူကြိုက်များသည်မဟုတ်သော်လည်းသင်ကြိုးစားသည်အထိသင်မသိပါ။ သငျသညျထဲသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအလုပ်မလိုအပ်နှင့်အတူပျော်မွေ့တစ်ခုအပို bit ။ သင်၏ပန်းရောင်လက်ချောင်းနည်းနည်းဖြင့်သင်စတင်နိုင်ပါသည်။
သင်၏လွယ်ကူချောမွေ့မှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ စည်းချက်ညီစွာထားပါ၊ ၎င်းသည်လာရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်
ပျော်စရာပါ မင်္ဂလာပါ။ မင်းတို့အချင်းချင်းပစ္စည်းအသစ်တွေသင်ပေးတယ်၊ မင်းကသူတို့ကိုမင်းဘယ်လိုလာပြီးဘယ်လိုစည်းလုံးစေမလဲဆိုတာကိုပြတာပါ၊ မင်းရဲ့လိင်ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ ဦး၊
မျှဝေသည် Nataša Pivec 5:02 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 29, 2018 ရက်တွင် (nevihta173 @)
သင်၏ဘဝတွင်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ရှိပါကဖုန်းကိုကောက်ယူပါ
သင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကူညီရန်ဖုန်းဖြင့်ညစ်ပတ်နေသောစကားပြောဆိုမှုတစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လှောင်ပြောင်ရန် Snapchat ကလစ်တိုများကိုပင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာအလှည့်၌သင်တို့ကိုလည်းကားမောင်း, သူတို့ကိုအရူးမောင်းလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဘာမှမမှားပါဘူးရိုးသားစွာရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်အစဉ်အဆက်သင်အဘို့ပြုပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ သင်ဤလုပ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ၊ သင်နှစ်သက်သောအရာကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ အခြားမိန်းကလေးများ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူပါ၊ ကောင်းသောစည်းချက်ကိုစောင့်ထိန်းပါ၊ သင်၏အခြေအနေကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ တုန်ခါမှုနှင့်အတူအချို့သော saucyness များကိုထည့်ပါ၊ သင်ဘဝပြောင်းလဲမှုအတွေ့အကြုံရှိပါလိမ့်မည်။
ဤအရာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်၏ခန္တာကိုယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မသိပါကအခြားမည်သူတစ် ဦး ကမည်သို့လုပ်မည်နည်း။ အိပ်ခန်းသည်စမ်းသပ်ရန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတင်ရန်အကောင်းဆုံးမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
၁) စိတ်ပျက်စရာဖြောင့်မိန်းကလေးများအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အထဲကစားရန်မည်သို့မည်ပုံ
၃) စိတ်ပျက်စရာမိန်းကလေးများ Tinder တွင်ယောက်ျားလေးများမလုပ်သင့်သောအရာများ
၄) ယောက်ျားများသည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ချက်ချင်းလုပ်ခဲ့သည့်အထူးဆန်းဆုံးအရာ ၁၉ ခုကိုမိန်းကလေးများကပြောပြသည်